2019 | Department of Medical Service
Office No. 4, Naypyitaw Union Territory
Ministry of Health and Sports Department of Medical Services
Training of Trainer on Hospital Reception Services သင်တန်း ကျင်းပပြုလုပ်
14/12/2020 27/12/2019 by Editor 1
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ၊ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဌာနစိတ်မှ ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် ဆေးရုံကြီးများ၊ ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့နှင့်အထက် ပြည်သူ့ ဆေးရုံများတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် Hospital Reception Services လုပ်ငန်း ပိုမိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဆေးလူမှု)၊ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးအရာရှိ၊ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးမှူးတို့အား မွမ်းမံသင်တန်းပေး၍ သင်တန်းဆင်းပြီးပါက တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် စုရပ်ပြုလုပ်ပြီး Hospital Receptionist ဝန်ထမ်းများ အား ဆင့်ပွားသင်တန်းပြုလုပ်ပေး၍ ဆေးရုံများ၏... Read More | Share it now!
သစ်လွင်သူနာပြုခန့်ထားခြင်း (၁၁၆ ဦး)
14/12/2020 23/12/2019 by Author 2
Click to access Nursing-order-2.pdf ... Read More | Share it now!
Categories အမိန့်/ကြေညာချက်များ Leaveacomment
သစ်လွင်သူနာပြုခန့်ထားခြင်း (၁၄၁ ဦး)
Click to access Nursing-order-1.pdf ... Read More | Share it now!
ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ရှိ သူနာပြုတက္ကသိုလ်များတွင် အထူးပြုသူနာပြုဒီပလိုမာ(၉)လသင်တန်း၊ B.N.Sc(Bridge) (၁)နှစ်သင်တန်းနှင့် B.N.Sc(Bridge) (၂)နှစ်သင်တန်း များသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
14/12/2020 23/12/2019 by Editor 1
Download Pdf; Click to access 9-months-Mdy1.pdf Click to access 9-months-Ygn-.pdf Click to access Nursing-University-YgnOn-Off.pdf Click to access Nursing-University-MdyOn-Off1.pdf ... Read More | Share it now!
Categories သတင်းများ, အမိန့်/ကြေညာချက်များ Leaveacomment
(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Implementation Research၊ Clinical Research နှင့် Public Health Research သုတေသန အဆိုပြုလွှာ proposal များ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့လျှောက်ထားရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊
20/12/2019 by nay win aung
Download pdf; Click to access IR.pdf ... Read More | Share it now!
mail - dms@mohs.gov.mm
MOHS Facebook Page
DOMS Facebook Page
Useful Government Website Links
Myanmar State Conseller Office